Sei kusika Crypto Exchange - Blockchain News
We kupa pfungwa dzako bvunzurudzo wendarama uye CEO of Crypto Exchange btc-alpha.com Vitali Bodnar, sei kuti kusika Crypto Exchange kubva muvare.
sei iwe kuziva pamusoro Cryptocurrency?
specialization Vangu dzidzo – Physics, kombiyuta sainzi, kombiyuta michina, I yairamba mubasa kukura. Zvimwe I netsaona kuverenga pamusoro Forum pamusoro bitcoin uye vakatanga kunzwisisa zuva, verenga zvose sei akunoita.
sei iwe kupinda Crypto indasitiri?
Zvakatanga nepfungwa yokuti ndakanga achishamisika kuti mugodhi kuitika. Mushure yokuzvifungidzira kunze kwacho, paiva nomumwe dambudziko – chii chokuita mari kuti I yakagadzirwa. Ndikatora mari exchanges, izvo, zviya, vaishanda zvikuru ipapo. Saka ini zvakanaka kushandisa kutengesa.
Nei imi kusarudza kuti unofanira kuumba Crypto Exchange?
Izvi imhaka yangu kutadza wokutanga. ini, kufanana chero muzvinashawo akanaka, vane mitemo kuti handina kuputsa: I kuronga pachine mbudo pfungwa kubva panzvimbo, I haashandi kana ndiri pasi kushushikana, Ndinoedza kugadzirisa minuses, zviri nyore kwandiri kuti kumirira, Handina recoup kuti zuva apo ndiri kuenda kubvisa, Ini chete kuvhara Laptop rangu uye hadzishandi. Kukundikana My zvakaitika nokuda kushushikana, uye panguva iyoyo ini akaputsa mumwe mitemo yose. Ndakaenda zvakaipa zvakawanda, akavhara panzvimbo akaipa, vakasarudza recoup. Nokuti zuva, I vakaperekedza 10 akavhiyiwa vane muenzaniso uyu. Ndakarasikirwa makumi mashomanana zviuru zvemadhora, iyo I chichiwanikwa pamusoro refu chaizvo nguva.
Izvozvo zvakabatsira sei kusikwa Exchange?
Ndakatanga kuongorora mamiriro ezvinhu uye vakaziva kuti imwe muzvinashawo kuwana, kana kurasikirwa nemari. Asi Exchange nguva dzose inoramba iri mubairo. Ndakaona kuti uyu ndiye zvose anonakidza zvikuru uye kuti ndinoda kusika yangu Crypto Exchange.
Ngativake 5 matanho kuti pave yako Crypto Exchange.
Zvangu, chokutanga ndechokuti “kupisa chete chigadzirwa.” Neshamwari dzangu dzose, Nevazikanwi, vatorwa, Ndakaudza vose kuti ndakanga nekukudziridza Crypto Exchange uye ndaida chikwata, vanhu, mari, uye vose akati kuti izvi asingadi kushanda, asi ndaiva nokutenda anopenga. izvi zvose chakanga anenge ari 2014-2015.
Sezvo ndaiva zvakanaka mukurumbira dzichiri zvirongwa, vanhu pakarepo kwakaonekwa vakanga vasingatendi muna cryptocurrency, kwete Crypto Exchange, asi mandiri somunhu yokuvaka anogona kusika chinhu chigadzirwa.
pakutanga, Ndakanga pfungwa unogona kutora akagadzirira akagadzirwa mujinga Cryptoexchange, yokugadziridza nayo zvishoma, uye kushanda. Sezvinoita platforms kuti onlineshop. Asi izvozvo chigadzirwa hariko. Kudzamisa kupinda nyaya, Ndakaziva kuti ndinoda kunyora zvose kubva muvare uye kunzwisisa zvose zvizere.
Pakuverenga basa rose womuenzaniso. Panguva iyoyo taishandisa bitcoinwisdom – mumwe okutanga zvinhu apo unogona kuona sei pamusika zvinofamba, uye ongorora zvose nokuda zuva, mwedzi, uye ona mavhoriyamu. Semuyenzaniso, exchange zuva inoitwa akavhiyiwa pamusoro 5000 BitCoins panguva zvimiso Gengi pamusoro $ 500. Exchange Commission – 0.4%. 500 zvikawanda ne 5000 uye 0.4 uye isu kuwana fungidzira purofiti pazuva.
saka, bhizimisi muenzaniso exchanges iri nyore?
Ehe, Ndinotenda kuti kana vamwe chinhu kuoma chaizvo, ipapo hazvishandi, chete zvinhu nyore kushanda.
Preparation unyanzvi nokurondedzerwa. Ndinofanira kutaura kuti kwokutanga hwokugadzira basa I zvakasikwa uye mugumisiro vakawana zvinhu vangasimudzira zvakasiyana, nokuti handina kunzwisisa guru kwazvo mashoko, dzimwe nguva kuti zvaiita kwandiri zvikuru havana kukosha zvachose, uye pamusoro zvinopesana. Iyi inyaya mwero.
Ndiudze muudzame, sei iwe kuti TS? Akawanepi ruzivo?
Panguva iyoyo, I nhumbi pamusoro exchanges zhinji uye akaona sei DDoS kurwisa kuitika, akaona sei exchanges vakaenda kusauka, achiona apo vanoshandisa vakanga vakavimbika kuna Exchange, uye kana havana, uye nei zvakaitika. Ini vaitorwa nezvaiva bhuku kubva ruzivo rwangu, Ndakaita chigadzirwa kwandatambura somunhu muzvinashawo aizova akasununguka. Ndaida akavhiyiwa zvose kuti kunzwisisika. Ndakashandisa chirongwa kuti pave inowanikwa, apo I akavhomora 25 mapeji yemberi nzvimbo uye akavaka pfungwa yaro. Uyezve, vose Cryptoexchanges vari zvikurukuru chete.
kazhinji sei uchishandisa wakagadzirira akagadzirwa rwokugadzira dambudziko?
Ndaida kushandisa kugamuchira uye kutumira bitcoin blockchain.info. Panguva iyoyo, vaigovera paruzhinji API. Panguva kutanga kwekupwanyiwa, zvaiita kwandiri kuti zvaiva zvakakwana kuti zvakanakisisa zvinobvira chigadzirwa shoma mari, uye ipapo kungoti kuvandudza uye kuvandudza chinhu chimwe nechimwe. Asi akaramba isu, pasina kutsanangura zvikonzero. Ndinofunga ichi ndechimwe nokukundikana vakabudirira zvikuru kuti zvakaitika. Takasarudza kufunga sei Bitcoin mabasa, uye akanyora zvachose muvare nemhosva yedu, riri ikozvino nguva dzose kuvandudzika. ndiko, Tine Bitcoin Wallet.
Ndiyo Team. Ndakanga ndatova zvakanaka kwakarongeka chikwata, vatakadzidza vaishanda mabasa maviri. Asi ndakazoona kuti hatina ruzivo zvakakwana kusika unhu chigadzirwa ari cryptosphere. saka, takasarudza kupomba ruzivo hwedu mamwe mabasa, semuyenzaniso, chikamu kukura kudzivirira DDos-kurwisa, zvekushandisa pakugamuchira mari, zvichingoenda zvakadaro. Kwemakore matatu takashanda pamusoro hwokugadzira basa uye muna zvakafanana – musi wechitatu-party muzvirongwa kunzwisisa sei zvose mabasa. Nemhaka iyi, uyewo patakaroorana kuzivana vanachiremba vakabatsira mberi basa redu.
Chinonyanya banal imari. Pakutanga, Ndakakwanisa kuunganidza anenge $ 300,000. Ndiro gore chikwata programmers, shoma mari, asi pasina panyaya mabasa pamutemo. Asi zvakanga zviri 2013. ikozvino, Ndofunga, kushoma pakati $ 1 miriyoni unodiwa. Takatanga mune yemakwikwi yakasiyana uye mumamiriro mamwe mamiriro ezvinhu, ipapo pakanga chete 5 unganidza exchanges, uye ikozvino pane mazana avo.
Chii Geolocation vanoita dzenyu?
The yose, asi isu ikozvino rambidza kunyoresa kubva America nokuti pamutemo nyaya.
vashandi vangani vanobatanidzwa vakachengeteka?
Kana pane kukurumidza basa, ipapo chikwata yose iri aidaro, uye pasinei nguva zvakaitika.
Pane imwe mapikira yokuwana kubatsirwa? uye chii?
Rimwe zuva, Akaripira mapikira yokuwana mukana chitsotsi e-mail mutariri. Saizvozvo, vakasagona chaizvoizvo dzika nayo, asi zvakanga hunonzi zvinogoneka kushandisa munjodzi iyi.
Uye zvakadini havana kubhadhara?
A mashoma zana, chiduku, sezvo ichi hachisi dzinonetsa munjodzi. Tine mazita mari kuwana avo kana zvimwe kubatsirwa.
Ndezvipi huru zvokutengeserana maviri uri Exchange?
Ndingaitei kuisa chiratidzo wangu uri Exchange?
Tine chikamu kuti achiwedzera mari, uye inoratidza zvakajeka ndiani tinogona kuwedzera asingaiti.
Tinotenda kuti zvinonakidza bvunzurudzo
Vakagadzirira nokuda CryptoRadio chikwata
The yemasvomhu vakaverenga mutengo bitcoin nokuda 2018
Mubayiro Bitcoin kuti ...
Today Belarus offici ...
zvirongwa guta New York ...
Previous Post:Blockchain chirongwa DFINITY Stiftung anomutsa $ 61M
Next Post:Canadian crypto Exchange Coinsquare anomutsa $ 30M
Rosia Bence anoti:
Kukadzi 12, 2018 pa 5:28 AM
make money on youtube views anoti:
Kukadzi 12, 2018 pa 2:51 PM
New Cryptocurrency Giving Away Free Coins anoti:
Kurume 1, 2018 pa 9:58 AM